शीर्ष US र UK विश्वविद्यालयहरूमा पाठ्यक्रमहरू - Shiv's Era
1. धेरै प्रख्यात विश्वविद्यालयहरूले AI मा MS को लागि भर्ना प्रस्ताव गर्दैछन्।
2. विश्वविद्यालयले छनोट गर्नका लागि प्रमुख र पाठ्यक्रमहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ।
3. आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा विशेषज्ञ बनाउनुहोस्, तपाईको क्षेत्रको पर्वाह नगरी।
4. विद्यार्थीहरूले पतन वा वसन्त सेमेस्टरमा सुरु गर्न सक्छन्।
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा स्नातकोत्तरका लागि भर्ना खुल्यो
अमेरिका र बेलायतका धेरै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयहरूले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा मास्टर्सको लागि भर्ना प्रस्ताव गरिरहेका छन्। विद्यार्थीहरू आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र यसका विभिन्न वर्गहरूका बारेमा समाजको हितका लागि प्रतिष्ठित कम्पनीहरूलाई सेवा दिन उत्सुक छन्।
हामी किन मास्टर डिग्रीबाट छुटकारा पाइरहेका छौं र यसलाई 30-क्रेडिट घण्टा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पाठ्यक्रमको साथ प्रतिस्थापन गर्दैछौं
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मास्टर डिग्री प्रोग्रामलाई 30-क्रेडिट घण्टाको पाठ्यक्रमको रूपमा डिजाइन गरिएको छ जसले विद्यार्थीहरूलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ताको लागि व्यापक रूपरेखा दिन्छ। विद्यार्थीहरूले सबै मूल अवधारणाहरूमा गहिराइ विकास गर्नको लागि विस्तृत कोर उद्देश्य पाठ्यक्रममा संलग्न हुनेछन्।
कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय मा नवीनता
विद्यार्थीहरूसँग कार्नेगी मेलोन संकायसँग अनुसन्धान परियोजनाहरू, सान्दर्भिक कम्पनीहरूसँग इन्टर्नशिपहरू, र औद्योगिक प्रायोजकहरूसँग सहयोगी परियोजनाहरू गर्ने अवसरहरू छन्। स्नातकहरू स्वचालित विज्ञानको उदीयमान प्रतिमानमा नेता बन्छन्।
कुन प्रमुखले सबैभन्दा धेरै तिर्नेछ? सबै Stanford Majors को शीर्ष आय
स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयमा अध्ययनको लागत भारतीय विद्यार्थीहरूको लागि प्रति वर्ष 41-60 लाख INR को बीचमा छ। विश्वविद्यालयले 69 प्रमुख र 200+ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमहरू प्रदान गर्दछ। स्ट्यानफोर्ड एमबीए, एमएस डाटा विज्ञान, र एमएस कम्प्यूटर विज्ञान विश्वविद्यालय मा शीर्ष नामांकन कार्यक्रमहरू मध्ये छन्।
आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्समा मास्टर्स खोज्ने बारे जान्नको लागि चीजहरू
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा मास्टर्स केही पाठ्यक्रमहरू मध्ये एक हो जुन विशुद्ध रूपमा एआई-केन्द्रित छन्। क्याम्पसमा विद्यार्थीको बराबरको शैक्षिक अनुभव प्रदान गर्दै।
सेन्ट लुइस विश्वविद्यालयको कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रमको मास्टर
सेन्ट लुइस युनिभर्सिटीको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा मास्टर कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई कठिन समस्याहरू समाधान गर्न र समाजको कल्याणलाई प्रभाव पार्न कृत्रिम बुद्धिमत्ता विधिहरू कुशलतापूर्वक र नैतिक रूपमा लागू गर्न तयार गर्दछ।
इलेक्ट्रिकल र कम्प्यूटर ईन्जिनियरिङ् मा विज्ञान को मास्टर को बारे मा – कृत्रिम बुद्धिमत्ता
इलेक्ट्रिकल र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ् मा विज्ञान को मास्टर – कृत्रिम बुद्धि। एकाग्रतामा ज्ञानको प्रतिनिधित्व र तर्क, न्यूरल नेटवर्क, मेसिन लर्निङ, डाटा माइनिङ, र कम्प्युटर भिजन समावेश हुन्छ।
सञ्चालन अनुसन्धानमा एमएसको लागि STEM कार्यक्रम
सञ्चालन अनुसन्धानमा MS पूर्ण वा अंशकालिक आधारमा 30-बिन्दु STEM कार्यक्रम हो। विद्यार्थीहरूले पतन वा वसन्तमा सुरु गर्न सक्छन्।
ब्रिजपोर्ट विश्वविद्यालयको स्कूल अफ इन्जिनियरिङबाट एमएस डिग्री
ब्रिजपोर्ट विश्वविद्यालयको स्कूल अफ इन्जिनियरिङद्वारा प्रस्तावित एमएस डिग्रीहरूलाई ICE (US अध्यागमन र भन्सार प्रवर्तन) द्वारा STEM (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्, र गणित) डिग्रीहरूको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। MS डिग्री हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूले OPT (वैकल्पिक व्यावहारिक प्रशिक्षण) को बाह्र (12) महिनाको लागि योग्य हुन्छन्।
एआई ल्याब कम्प्युटेशन हलमा आउँदैछ
मानव-कम्प्यूटर अन्तरक्रिया (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) कार्यक्रममा एमएसले विद्यार्थीहरूलाई व्यावहारिक सीपहरू र सैद्धान्तिक बुझाइहरू प्रदान गर्दछ। विद्यार्थीहरूले चार सहभागी एकाइहरू मध्ये कुनै एक मार्फत कार्यक्रममा प्रवेश गर्न आवेदन दिन सक्छन्। विविध र एक्लेक्टिक पृष्ठभूमि भएका विद्यार्थीहरूलाई आवेदन दिन प्रोत्साहित गरिन्छ।
राम्रो परामर्श र मद्दतको लागि कसरी इन्जिनियरिङ सिक्ने
इन्जिनियरिङ्को मास्टर (MEng) कार्यक्रमले काम गर्ने पेशेवरहरूलाई राम्रो सेवा दिन इन्जिनियरिङको अभ्यासमा केन्द्रित छ। कार्यक्रमले आफ्नो ज्ञान र विशेषज्ञता विस्तार गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरूलाई उन्नत प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ।